IFlorence, idolobha eligcwele ubuciko | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Florencia, General, Italia
Leli elinye idolobha enginalo ohlwini lohambo oluzayo, nokuthi angazi noma ngabe kufanele ngibeke ngaphambi noma ngemuva kweRoma, ngoba lokhu kubaluleke kakhulu, kepha Florencia kunobuciko obukhulu kakhulu emgwaqweni, ezakhiweni nasemamnyuziyamu. Kunomlando omningi kangangokuba ohambweni olulodwa nakanjani sizoshiya ukuhambela okuningi okuzokwenziwa.
Sizozama funa zonke lezo zinto ezibalulekile Yini ongayibona uma uvakashela iFlorence, ngoba siyazi ukuthi akuwona wonke umuntu ongachitha inyanga edolobheni ukuyibona ngokuningiliziwe. Kukhona njalo izinto ezingafanele ukuphuthelwa, uma kwenzeka singenalo ithuba lokubuyela kuleli dolobha elihle elibukeka limile ngekhulu le-XNUMX. Ingabe ujoyina lolu hambo?
1 Imininingwane yohambo
2 I-Piazza del Duomo
3 IPonte Vecchio noma i-Old Bridge
4 Iminyuziyamu yaseFlorence
Njengoba uFlorence ese-Italy, izakhamizi ze-European Union zizodinga kuphela i-DNI ukuzungeza yona. I-euro nayo iyimali esemthethweni, futhi uhlelo luyafana naseSpain, ngakho-ke izinguquko zizoba zincane. Awekho amalungiselelo amaningi wokwenza lolu hambo, ngoba isimo sezulu naso sihle. Izinyanga ezinhle kakhulu zokuvakashela iFlorence yilezo intwasahlobo nokuwa, ngoba maphakathi nehlobo ukushisa kungaklinya labo abangakujwayele. Ukuhambahamba edolobheni ungasebenzisa olayini bamabhasi, kanye ne-Agile Charter, yohambo oluyi-10 nangu-21, olungabiwa futhi phakathi kwabantu abaningana, ukuze uthole okuningi kulo.
Lokhu kumele kube ukuqala kohambo oluya eFlorence, isikwele esidume kakhulu, okwakuyisikhungo senkolo nezenkolo sasedolobheni. Kuyo ungabona ifayela le- ICathhedral yaseSanta Maria de las Flores, ngensimbi yaso edumile yensimbi noma iGiotto's Campanile, kanye neBattisterio di San Giovanni, isakhiwo esidala kunazo zonke edolobheni. Zonke ziyamangalisa, ngaphakathi nangaphandle, ngakho-ke ukuvakasha kuyadingeka ukubona izinto zazo zangaphakathi ezicebile. Kulesi sikwele kukhona neMuseo dell'Opera del Duomo, lapho kutholakala khona izithombe zokuqala ezazivamise ukuhlobisa lesi sikwele.
La IFlorence Cathedral Yaqedwa ngekhulu le-XNUMX, futhi iqukethe ithuna likaBrunelleschi, umklami wase-Italy owadala leli dome elikhulu, elihlukanisa leli thempeli elikhulu kunoma yiliphi elinye. Kwakuyinselelo yakhe enkulu, azinikele kuyo iminyaka eminingi, futhi ingaphakathi laleli dome libuye lihlotshiswe ngobuciko ngezigcawu ezipendiwe zeSigwebo Sokugcina. Ungavakashela ngaphakathi ubone idolobha ngenhla. ICampanile ingumbhoshongo wensimbi, ongakhuphuka nawo ukuze ujabulele ukubukwa kwedolobha.
Ekugcineni, kulesi sikwele singabona i- Ukushaya amabhande, isakhiwo esidala kakhulu ngesitayela esifanayo nezinye izikhumbuzo eFlorence, nengaphandle laso liyimabula emhlophe noluhlaza. Ngaphakathi singabona umdwebo omuhle waseByzantine kule dome, ogqame ngamathoni awo egolide.
IPonte Vecchio noma i-Old Bridge
Lokhu nakanjani yi isithombe esaziwa kakhulu edolobheni, lowo ommele emhlabeni wonke. Yadalwa ngekhulu le-1345, futhi bekungukuphela kwayo eyasinda eMpini Yezwe II isaphelele. Kugqame kulezo zindlu ezilengisiwe, lapho namuhla kukhona abasebenza ngamatshe obucwebe kanye nabakhandi begolide, belandela isiko lobuciko lomuzi. Kuwo kukhona neVasari Corridor, esukela ePalazzo Vecchio iye ePalazzo Pitti. Ngaphezu kwalokho, ungabona izingidi eziningi zilenga ebhulohweni, ezishiywa yizithandani njengophawu lothando lwazo.
La Uffizzi Gallery Ingumnyuziyamu ovakashelwe kakhulu edolobheni, hhayi ize ibe neqoqo lamaqoqo wemidwebo elidume kakhulu emhlabeni, lapho vele imidwebo yabaculi abakhulu be-Renaissance yase-Italy ivelele khona. Isebenza nguBotticelli, uLeonardo da Vinci, uMichelangelo, uRaphael noTitian. Le misebenzi ihlelwe ngokulandelana kwayo, kanti nomnyuziyamu unesakhiwo esilula kakhulu, ukuze kube lula ukuvakashelwa. Kodwa-ke, kufanele kucatshangwe ukuthi kuvame ukuba nolayini abakhulu, ngakho-ke indlela engcono yokuyigwema ukubhukha uhambo oluqondiswayo noma ngokubeka amathikithi online.
Ngakolunye uhlangothi, sine-Accademia Gallery, nayo okumele ibonwe edolobheni. Le galari ingeyesibili evakashelwa kakhulu ngoba inesithombe esaziwa kakhulu se- UMichelangelo, uDavid. Kuyinto ebukekayo, ngemabula emhlophe ngamamitha ayi-5,17 ukuphakama. Yize ibikhonjiswe ePiazza della Signoria, ngo-1873 yathuthwa yangena ngaphakathi kugalari ukuyivikela ekugqashukeni kwezimo zezulu. Kule galari kukhona namanye amakamelo lapho ungabona khona izithombe eziqoshiwe nemidwebo ehlukahlukene yezenkolo.
Okwenzelwe ukwazi, i- IGalileo Museum, lapho kugcinwa khona izinto zesayensi ezivela ku-Renaissance. Enye yezingcezu zayo ezibaluleke kakhulu isibonakude iGalileo, futhi lokhu kungaba ukuvakashelwa okuthakazelisayo kulabo abathanda isayensi nomlando.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Florencia » IFlorence, idolobha eligcwele ubuciko
Yini okufanele uyibone futhi uyenze eBruges